အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Zwal Mhan - ဝီကီပီးဒီးယား
အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Zwal Mhan
၁ ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Zwal Mhan !
၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
၄ မတ် ၂၀၂၀
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Zwal Mhan ![ပြင်ဆင်ရန်]
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၀၄:၄၂၊ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ (UTC)
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ကတော့ Ninjastrikers ဖြစ်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ရေးသားထားတဲ့ သင့်ရဲ့ မကြာမီက ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှုဟာ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ မူဝါဒနဲ့ ကိုက်ညီခြင်း မရှိတဲ့အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ဆိုတာကို အသိပေးလိုပါတယ်။ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားမှာ ယူနီကုဒ် ၅.၂ စံနှုန်းကို လိုက်နာသော မည်သည့်ဖောင့်အမျိုးအစားနဲ့မဆို ဖတ်ရှုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖောင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များအတွက် ဤစာမျက်နှာကို ဖတ်ရှုပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၄:၅၀၊ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ကတော့ Ninjastrikers ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော သင့်ရဲ့ မကြာမီက ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှုကို အပြုသဘော မဆောင်တဲ့အတွက် နောက်ပြန်ပြင်လိုက်တယ်ဆိုတာကို အသိပေးလိုပါတယ်။ အကယ်၍ စမ်းသပ်လိုတယ်ဆိုပါက ကျေးဇူးပြုပြီး sandbox မှာ ပြုလုပ်ပေးပါ။ မှားယွင်းဆောင်ရွက်မိတယ်လို့ သင်ယူဆပါက ဒါမှမဟုတ် မေးမြန်းစရာတွေ ရှိပါက ကျွန်ုပ်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာမှာ စာတိုချန်ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၂:၃၀၊ ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (UTC)
ဝီကီပီးဒီးယားတွင် အပြုသဘောမဆောင်သော တည်းဖြတ်မှုမျိုးကို ကျေးဇူးပြု၍ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင့်တည်းဖြတ်မှုများဟာ လက်သရမ်းခြင်းတွင် ပါဝင်နေတဲ့အတွက် နောက်ပြန်ပြင်လိုက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်တည်းဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ sandbox ကို အသုံးပြုပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲ လက်သရမ်းခြင်းကြောင့် တည်းဖြတ်မှု အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၇:၁၇၊ ၂၂ မတ် ၂၀၂၀ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Zwal_Mhan&oldid=507587" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ မတ် ၂၀၂၀၊ ၁၇:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။